​တိုင်း​ရင်း​သား​တွေ ​ဘိန်း​စိုက်​တယ်​ဆို​ပီး ​ခေါင်း​စဉ်​တပ် ​အ​ပြစ်​တင်​နေ​တဲ့ ​တပ်​မ​တော် Nurhad‎ (22 February 16) ﻿
​ ​တိုင်း​ရင်း​သား​တွေ ​ဘိန်း​စိုက်​တယ်​ဆို​ပီး ​ခေါင်း​စဉ်​တပ် ​အ​ပြစ်​တင်​နေ​တဲ့ ​တပ်​မ​တော် . . .
​အ​ခု​တိုင်း​ရင်း​သား​တွေ​ကိုယ်​တိုင် ​ဘိန်း​ခင်း​တွေ​ကို ​ဖျက်​တော့ ​တပ်​မ​တော်​က ​အ​ဖျက်​မ​ခံတ့ဲ​အ​ပြင် ​ဘိန်း​ခင်း​ကို ​
​အ​ပြည့်​ချ​ထား​လိုက်​တာ ​တပ်​မ​တော်​ရဲ့ ​စောက်​ရှက်​တွေ ​ကွဲ​ကုန်​တာ​ပေါ့​ဗျာ . . .
​တ​သတ်​လုံး ​လိမ်​ခဲ​တာ​တွေ ​အ​ခု​မှ ​ရုပ်​လုံး​ပေါ်​ကုန်​တယ် . . .
​က​မ္ဘာ​တစ်​ဝှမ်း​က ​အ​ထူး​စိတ်​ဝင်​စား​တဲ့ ​သ​တင်း​ဖြစ်​သွား​ပြီ . . .
​တပ်​မ​တော်​က ​ဘာ​ဆက်​လုပ်​မ​လည်း​ဆို​တာ ​က​မ္ဘာ​က​စောင့်​ကြည့်​ရုံ​လေး​ပါ . . .
​အ​မှန်​တ​ရား​ကို ​ရဲ​ရဲ​ကြီး​ဖော်​ထုတ်​လိုက်​တာ ​အ​ရမ်း​လေး​စား​ပါ​တယ် ​က​ချင်​တိုင်း​ရင်း​သား၊​
​ဘိန်း​စိုက်​ခင်း​ပိုင်​ရှင်​များ​နှင့် ​ထိပ်​တိုက်​မ​တွေ့​စေ​ရန် ​အ​ခြေ​အ​နေ​ကို ​ကြို​တင်​ထိန်း​သိမ်း​ခြင်း​သာ​ဖြစ်​ကြောင်း ​က​ချင်​ပြည်​နယ်​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​ပြော
​ဘိန်း​ခင်း​များ​ကို ​သွား​ရောက်​ဖျက်​ဆီး​မည့် ​လူ​ထု​အ​ခြေ​ပြု ​မူး​ယစ်​ဆေး​ဝါး​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့​ကို ​ချီ​ဖွေ​လမ်း​ခွဲ​တွင် ​တား​ဆီး​ထား​ရာ ​တပ်​မ​တော်​သား​တစ်​ဦး​နှင့် ​မူး​ယစ်​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့​ဝင်​များ​ကို ​ဖေ​ဖော်​ဝါ​ရီ ၁၉ ​ရက်​က ​တွေ့​ရ​စဉ် (​ဓာတ်​ပုံ − ​မ​ရန်)
​က​ချင်​ပြည်​နယ်​ရှိ ​ချီ ​ဖွေ​နှင့် ​ကန်​ပိုက်​တီး​ဘက်​သို့ ​ဘိန်း​ခင်း​သွား​ရောက်​ဖျက်​ဆီး ​မည့် ​လူ​ထု​အ​ခြေ​ပြု​မူး​ယစ်​ဆေး​ဝါး​တိုက် ​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့​သည် ​ယ​နေ့​အ​ထိ ​ချီ​ဖွေ​လမ်း​ခွဲ​တွင် ​ရှိ​နေ​ဆဲ​ဖြစ်​ပြီး ​တပ်​မ​တော်​နှင့် ​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​က ​ဘိန်း​စိုက်​ခင်း​ပိုင်​ရှင်​များ​နှင့် ​ဖြစ်​လာ​မည့် ​ပြ​ဿ​နာ​ကို ​ကြို​တင် ​ထိန်း ​သိမ်း​ထား​ခြင်း​သာ​ဖြစ်​ကြောင်း ​က​ချင်​ပြည်​နယ် ​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​မှူး​ရုံး ​တာ​ဝန်​ရှိ​သူ​က ​ပြော​သည်။
​ထို​ကိ​စ္စ​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ​မူး ​ယစ်​ဆေး​ဝါး​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့ ​သည် ​က​ချင်​ပြည်​နယ် ​လုံ​ခြုံ​ရေး ​နှင့် ​နယ်​စပ်​ရေး​ရာ​ဝန်​ကြီး​အ​ပါ​အ ​ဝင် ​ပြည်​နယ်​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​မှူး​တို့​နှင့် ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ရာ ​နေ​ပြည် ​တော်​သို့ ​တင်​ပြ​ထား​ကြောင်း ​သ ​တင်း​ရ​ရှိ​သည်။
​နေ​ပြည်​တော်​မှ ​ခွင့်​ပြု​ချက် ​ရ​ရှိ​ပါ​က ​တပ်​မ​တော်​နှင့်​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့ ​ပါ ​လုံ​ခြုံ​ရေး​လိုက်​ပါ​ပြီး ​အ​တူ​တ ​ကွ​ဆောင်​ရွက်​ရန် ​ရှိ​သည်​ဟု ​မူး​ယစ်​ဆေး​ဝါး​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့ ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး ​ဦး​ဒေါင်​ခေါင်​က ​ပြော​သည်။
​လူ​ထု​အ​ခြေ​ပြု​မူး​ယစ်​ဆေး ​ဝါး​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့​သည် ​ပြီး​ခဲ့ ​သည့် ​ဇန်​န​ဝါ​ရီ ၆ ​ရက်​က ​စ​တင်​၍ ​ပူ​တာ​အို၊ ​တ​နိုင်း၊ ​ဆွမ်​ပ​ရာ​ဘွမ်၊ ​ချီ​ဖွေ၊ ​ဝိုင်း​မော် ​စ​သည့်​ဒေ​သ​များ ​ရှိ ​ဘိန်း​ခင်း​များ ​ဖျက်​ဆီး​စဉ် ​လူ​တစ်​ဦး​သေ​ဆုံး​ခဲ့​ရ​ပြီး ​ချီ​ဖွေ​ဘက် ​သွား​စဉ်​လည်း ​ဘိန်း​ခင်း​ပိုင်​ရှင် ​များ​နှင့်​ထိပ်​တိုက်​တွေ့​ကာ ​ဘိန်း​ခင်း​ဖျက်​သူ​အ​ချို့ ​ဒဏ်​ရာ​ရ​ရှိ​ခဲ့ ​ကြောင်း ​သ​တင်း​ရ​ရှိ​သည်။
‘‘​ဟို​ဘက်​က ​စောင့်​ပြီး ​ရန်​ပြု ​မယ့်​အ​နေ​အ​ထား​တွေ​ဖြစ်​မှာ​စိုး ​လို့ ​ခ​ဏ​ထိန်း​ထား​တဲ့​သ​ဘော​ပဲ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​တို့​က ​တား​ဆီး​တာ​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​ဖြစ်​လာ ​မယ့် ​ပြ​ဿ​နာ​ကို ​မျှော်​တွေး​ပြီး ​ထိန်း​သိမ်း​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်’’​ဟု ​က​ချင်​ပြည်​နယ်​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​မှူး​ရုံး ​ရဲ ​မှူး​ကြီး​ချစ်​ဦး​က ​ဖေ​ဖော်​ဝါ​ရီ ၁၇ ​ရက်​၌ ​ပြည်​နယ်​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​မှူး​ရုံး ​တွင် ​ကျင်း​ပ​သည့် ​သ​တင်း​စာ​ရှင်း ​လင်း​ပွဲ​၌ ​ပြော​ကြား​ခဲ့​သည်။
​ဆ​ဒုံး​လမ်း​ဘက်​တွင် ​ဘိန်း ​ခင်း​ပိုင်​ရှင်​များ​က ​တုတ်၊ ​ဓား၊ ​သေ ​နတ်​များ​ကိုင်​ပြီး ​စောင့်​နေ​သည် ​ဆို​၍ ​ဘိန်း​ခင်း​များ​ကို ​ဇွတ်​အ ​တင်း​ဝင်​ဖျက်​ခဲ့​ပါ​က ​ပြ​ဿ​နာ​ဖြစ် ​ပေါ်​လာ​မည်​ဆို​လျှင် ​က​ချင်​ပြည် ​နယ်​သ​မိုင်း​မှာ ​အ​လွန်​ရိုင်း​မည်​ကို ​လည်း ​စိုး​ရိမ်​မိ​ကြောင်း ​၎င်း​က ​ဆို ​သည်။
​ယင်း​ကိ​စ္စ​ရပ်​များ​ကို ​ပြ​ဿ​နာ​မ​ဖြစ်​ဘဲ ​ဖြေ​ရှင်း​နိုင်​အောင် ​မြောက်​ပိုင်း​တိုင်း ​တိုင်း​မှူး​နှင့် ​က ​ချင်​ပြည်​နယ်​ဝန်​ကြီး​ချုပ်​တို့ ​ညှိ​နိှုင်း ​တိုင်​ပင် ​အ​ဖြေ​ရှာ​နေ​ကြောင်း ​သ​တင်း​စာ​ရှင်း​လင်း​ပွဲ​တွင် ​တပ်​မ ​တော်​ကိုယ်​စား​လှယ်​အ​ဖြစ် ​တက်​ရောက်​ခဲ့​သည့် ​ဗိုလ်​မှူး ​ဝင်း​မျိုး ​အောင်​က ​ပြော​သည်။
​လူ​ထု​အ​ခြေ​ပြု ​မူး​ယစ်​ဆေး ​ဝါး​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့​ဘက်​က ​လည်း ​လက်​ရှိ​တွင် ​အ​ဆို​ပါ​ချီ​ဖွေ ​လမ်း​ခွဲ​လမ်း​ပေါ်​တွင် ​လူ​ပေါင်း ၃,၀၀၀ ​ကျော်​ရောက်​နေ​ပြီ​ဖြစ်​ပြီး ​ရက်​ရှည်​စောင့်​ရ​ပါ​က ​အ​ဆင်​မ ​ပြေ​သည့်​အ​တွက် ​တပ်​မ​တော်​နှင့် ​အ​စိုး​ရ​တို့​က ​တိ​ကျ​သည့် ​အ​ဖြေ ​တစ်​ခု​ပေး​ရန် ​မျှော်​လင့်​နေ​သည်။
​အ​ဆို​ပါ​အ​ဖွဲ့​သည် ​ဖေ​ဖော် ​ဝါ​ရီ ၁၆ ​ရက်​က ​ဝိုင်း​မော်​မြို့​မှ ​ဆ​ဒုံး​မြို့​ဘက်​သို့ ​သွား​နေ​စဉ် ​ချီ​ဖွေ​လမ်း​ခွဲ​တွင် ​တပ်​မ​တော်​က ​အ​ထက်​အ​မိန့်​ဟု​ဆို​ကာ ​ရပ်​ဆိုင်း​နေ​ရ​ခြင်း ​ဖြစ်​သည်။
​ပြီး​ခဲ့​သည့် ​ဇန်​န​ဝါ​ရီ​လ​ကုန် ​တွင် ​အ​ဆို​ပါ​ချီ​ဖွေ​နှင့် ​ဆ​ဒုံး​ဒေ​သ ​ဘက်​တွင် ​လူ​ထု​အ​ခြေ​ပြု ​မူး​ယစ် ​ဆေး​ဝါး​တိုက်​ဖျက်​ရေး​အ​ဖွဲ့​က ​ဘိန်း​ခင်း​များ ​သွား​ရောက်​ဖျက်​ဆီး ​ခဲ့​ပြီး ​ရဲ​များ​နှင့် ​တပ်​မ​တော်​သား ​များ​က​လည်း ​လုံ​ခြုံ​ရေး​လိုက်​လံ ​ဆောင်​ရွက်​ပေး​ခဲ့​သည်။